2015 June | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 12
မှိုင်း (ဆေး – ၂) – ကျောထောက်နောက်ခံက ပြောပလောက်စရာမရှိဘူး
မှိုင်း (ဆေး – ၂) – ကျောထောက်နောက်ခံက ပြောပလောက်စရာမရှိဘူး (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅ ဘာမှမရှိတော့ဘူး …. ရေ၊ မြေ၊ တော၊ တောင် သဘာဝ သယံဇာတ...
မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ
မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ ( ပြ င် သ စ် သ မို င်းမှ လူ ဝီ ဘု ရင် များ...
သစ်ကောင်းအိမ် – ကျီးကန်း …
သစ်ကောင်းအိမ် – ကျီးကန်း … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅ ဇာတ်လမ်းက ကျီးကန်းနဲ့ ကျီးမ လစ်ဗင်းတူဂဲသားနေရာက စခဲ့တယ်ဆုိုပါစုို့။ ကျီးကန်းက ဂုိုးရှေ့ရောက်တုိုင်း ခြေခေါက်လှဲတတ်တဲ့ နာမည်ကြီးတုိုက်စစ်မှုးတယောက်ဖြစ်တယ်။ ကျီးကန်းမကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆုိုင်ရာအချစ်စိတ်နဲ့...
အဖြေမထွက်တဲ့ မေ ၂၇ – NLD နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်တို့ နိုင်ငံရေးပူးတွဲကြေညာ သတင်းစာရှင်းလင်းမှု ကောက်နုတ်ချက်များ
အဖြေမထွက်တဲ့ မေ ၂၇ – NLD နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်တို့ နိုင်ငံရေးပူးတွဲကြေညာ သတင်းစာရှင်းလင်းမှု ကောက်နုတ်ချက်များ ဟန်သစ်နိုင်၊ မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်း၊...
လင်းအေးထင် – အလွမ်းသမားနပိုလီယံ
လင်းအေးထင် – အလွမ်းသမားနပိုလီယံ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅ ‘နန်းပလ္လင်ဆိုသဟာ ခုံရှည်တန်းလျားကို ကတ္တီပါအုပ်ထားတာပဲ’ ထိုင်ခုံတွေကို ကတ္တီပါစနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ လန်ဒန်မြေအောက်ရထားက နပိုလီယံကို ကိုးကားကြော်ငြာတယ်…၊ မြို့ကြီးကို မြစ်ကြီးကို...
ဖိုးစီ (ရုံးတော) – ဋ္ဌာပနာအတွင်းသို့ ၀င်ကြည့်ခြင်း
ဖိုးစီ (ရုံးတော) – ဋ္ဌာပနာအတွင်းသို့ ၀င်ကြည့်ခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ သံဃာအဖွဲ့အစည်း (Institution) က အရေအတွက် များသလို...
သားကြီးမောင်ဇေယျ – တရားဥပဒေ စစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ
(ကဗျာဆရာ စံညိန်းဦးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က ယူပါတယ်) သားကြီးမောင်ဇေယျ – တရားဥပဒေ စစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ ( ၈ )ကြိမ် မြောက် ရုံးထုတ် (၂၆-၀၅-၂၀၁၅) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၅...
ဒေါ်စုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ မင်းသမီး မီချဲယိုး ကော့မှူးသို့ အလည်ရောက်၊ ရွေးကောက်ပွဲတော့ I don’t know ဟု ဖြေဆို …
ဒေါ်စုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ မင်းသမီး မီချဲယိုး ကော့မှူးသို့ အလည်ရောက်၊ ရွေးကောက်ပွဲတော့ I don’t know ဟု ဖြေဆို … ဟန်သစ်နိုင်၊ မိုးမခ။ (ရန်ကုန် မေလ ၃၀၊ ၂၀၁၅) ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီချဲယိုးသည်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAAစခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၂)
Burma Army Commander-in-Chierf Snr-Gen Min Aung Hlaing meets with leaders of the United Wa State Army in Lashio, Shan...